University of Kansas Nkọwa
Students (ihe ruru.) : 28100
Echefukwala atụle University of Kansas
Idebanye aha na University of Kansas
University of Kansas bụ a ọha na alụmdi na e hiwere na 1865.
ndika Nkuzi ego na University of Kansas bụ $26,000.
taa, Ku aghọwo a isi ọha nnyocha na izi alụmdi nke 28,000 ụmụ akwụkwọ na 2,600 ngalaba on ise campuses (Lawrence, Kansas City, nweekwa Park, Wichita, na Salina). Ya iche iche n'eluigwe na ụwa e jikọrọ ha ozi ịkụziri isi, ewu ahụ ike oha obodo, na-eme ka nchoputa na-agbanwe ụwa.
Ku nwere 13 ụlọ akwụkwọ, gụnyere nanị n'ụlọ akwụkwọ nke na-ere ọgwụ na nkà mmụta ọgwụ na steeti, na-enye ihe karịrị 370 ogo mmemme. Karịsịa ndị pụrụ iche agụmakwụkwọ, obodo management, okwu na-asụ asụsụ daa ọrịa, ime obodo na nkà mmụta ọgwụ, adakarị nwa akparamaagwa, nwa ara na-, ọrụ ọgwụ, na-elekọta mmadụ ọdịmma. Students, kewaa fọrọ nke nta dokwara n'etiti ndị inyom na ndị ikom, -abịa site niile 50 na-ekwu na 105 mba na nwere ihe 15 percent multicultural. The University asọpụrụ Mmemme na mba ghọtara, na Ku ebipụtawo 26 Rhodes Scholars, ihe karịrị ihe ndị ọzọ nile Kansas ụlọ akwụkwọ jikọtara.
The University of Kansas Cancer Center bụ obodo si naanị ẹkedọhọde National Ọrịa cancer Institute. Eleven ndị ọzọ isi emmepe elekọta nnyocha na-adịru ndụ mbipụta, na Humanities, njem, na gburugburu ebe obibi, biosciences, biodiversity, na polar ice Ibé akwụkwọ, n'etiti ndị ọzọ.
Arts (a unit nke CLAS)
Accounting & ozi Systems
Finance, Economics & Mkpebi Sciences Management
Marketing, itumgbere & iwu
Usoro Ọmụmụ & Teaching
Health, Sport, & Mgbatị Sciences
Ọdụdọ Engineering & Kọmputa sayensị
Engineering Management & Njikwa ọrụ
News & ozi
Diagnostic gbasara obi Sonography
diagnostic Ultrasound & vaskụla Technology
Health Ozi Management
nurse ná Nkụnwụ Ahụ
ghara ịgbanwe Science
akụkụ okuku ume na Care
East Asian Language & omenala
Ọmụmụ ihe dị ndụ & Evolutionary Biology
mkpụrụ ndụ ihe nketa
Germany Asụsụ & Literatures
Global na International Studies, Center maka
Ụmụ amaala Studies
Humanities & Western Mmepeanya
Russian, East European & Yurop Studies
Slavic Asụsụ & Literatures
Speech-Language-anụ: Sciences & ọrịa
Women, Gender & Mmekọahụ Studies Program
music Education & music Agwọ
music Theory & music mejupụtara
emepụta ọgwụ Chemistry
Public Affairs na Administration (a unit nke CLAS)
on February 20, 1863, Kansas Governor Thomas Carney banyere n'ime iwu a ụgwọ na-eke ala mahadum Lawrence. Iwu e oyi n'elu a onyinye si n'aka Lawrence nke a $15,000 onyinye ego na a na saịtị maka mahadum, na ma ọ bụ na nso nso obodo, nke na-erughị iri anọ acres (16 o nwere) ala. Ọ bụrụ na Lawrence egbolighị ọnọdụ ndị a, Emporia kama Lawrence ga-enweta na mahadum.
The saịtị ahọrọ maka mahadum bụ a ugwu maara dị ka Ugwu Oread, nke e nwekwaranụ site mbụ Kansas Governor Charles L. Robinson. Robinson na nwunye ya Sara onyere 40-acre (16 o nwere) saịtị na State of Kansas n'ọnọdụ ala ndị ọzọ. The philanthropist Amos Adams Lawrence nyere $10,000 nke dị mkpa onyinye ego, na na ụmụ amaala nke Lawrence welitere fọdụrụ ego site na-esite na ndetu kụziri site na Gọvanọ Carney. on November 2, 1863, Gọvanọ Carney mara ọkwa na Lawrence zutere ọnọdụ na-ala mahadum, na ndị na-esonụ afọ na mahadum e eze haziri. The ụlọ akwụkwọ Board of Regents ẹkenịmde ya nzukọ mbụ na March 1865, nke bụ ihe omume ahụ na Ku Mgbagwoju ya tọọ ntọala si. Ọrụ na mbụ na mahadum ụlọ malitere mgbe e mesịrị na afọ. The mahadum meghere maka klas on September 12, 1866, na mbụ na klas akwụkwọ na 1873.
N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, Kansas bụ otu n'ime 131 kọleji na mahadum mba na wee akụkụ ke V-12 Navy College Training Program nke nyere ụmụ akwụkwọ a ụzọ ka a Navy ọrụ.
Ị chọrọ atụle University of Kansas ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Kansas na Map
photos: University of Kansas ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Kansas.
University of California, Los Angeles na Angales